Kilalaky : hiaka-tsehatra any Frantsa i Bagzana | NewsMada
Kilalaky : hiaka-tsehatra any Frantsa i Bagzana
Nikopak’elatra niampita ranomasina, hanatanteraka fiakarana an-tsehatra any Frantsa, ny tarika Bagzana. Haharitra 20 andro eo ho eo ny fivahinian’ity tarika mivoy ny kilalaky nentim-paharazan’i Menabe ity any. Hitety toerana maromaro izy ireo ary samy seho goavana avokoa no hotontosaina amin’izany, araka ny nambaran’ny avy eo anivon’ny « Metis prod » izay mandray an-tanana ny tarika Bagzana ankehitriny.
Manana tanjona manokana izao fitetezam-paritra any ivelany izao. Eo aloha ny fampahafantarana bebe kokoa ny mozika nentim-paharazana malagasy, toy ny kilalaky. Etsy ankilan’izany, miezaka mitrandraka ny tsenan’ny mozika iraisam-pirenena ihany koa ry Bagzana, araka ny nambaran’ny mpikarakara ny tarika hatrany.
Raha tsiahivina, anisan’ireo namaky lay tamin’ny fivoizana ity gadona avy any amin’ny faritra Menabe ity ry Bagzana. Nomarihin’ny tompon’andraikitra ao amin’ity trano mpamokatra ity hatrany fa santatra am-bava rano ny tahaka izao, fa mbola maro ireo mpanakanto Malagasy hanara-dia ny tarika Bagzana.